China New 5 na 1 ngwakọta okpomọkụ pịa igwe factory na-emepụta | Taile
New 5 na 1 ngwakọta ọkụ pịa igwe
Ọhụrụ 5 na 1 igwe igwe ọkụ ọkụ nwere ike iji maka T-shirts, okpu, efere seramiiki, taịliki seramiiki, iko, ụsọ mmiri, jigsaw puzzles, leta, misc ndị ọzọ. akwa & ihe wdg. akpa, coasters, jigsaw egwuregwu mgbagwoju anya, leta, ndị ọzọ misc. akwa & ihe wdg O nwere ike nyefee yi foto na odide nke sublimating na etisasịwo ebi akwụkwọ ink jidesie ceramik, iko, na textiles dị ka owu, flax, chemical eriri, naịlọn, wdg nwekwara ike ịtọ kpọmkwem oge na okpomọkụ.
1.Swinging Design - na arụ ọrụ mwepụ, ntụgharị ntụgharị nke 360 ​​nke ogwe aka nke na-eme ka ihe ndị ahụ na-ekpo ọkụ dị jụụ, Ogwe mgbatị mgbatị zuru oke nke na-eme ka mbipụta ahụ kwụsie ike, na-ebelata ohere nke ihe ọghọm na-atụghị anya ya.
2.Reliable Quality - Na 15 "" x 15 "" nnukwu ọkụ platen, mugs kpo oku akụkụ: 2.3 "" - 3.5 "" dayameta (11 oz); 8 sentimita asatọ efere kpo oku akụkụ: 5 "" max dayameta; 10 sentimita asatọ efere akụkụ kpo oku: 6 "" max dayameta; okpomoku kpo oku: 6 "" x 3 "" (curved)
3.Pressure Kemeghi - a na-ekpo ọkụ pịa na a nso nke mgbali mgbanwe ukpụ, nke nwere ike gbanwee dị ka ọkpụrụkpụ nke ihe. Uzo a na - agbanwe na - agbanwe agbanwe nwere ike iji ihe ndi ozo dochie ya site na iji Phillips scredriver. Enwere ike ịkwanye paadị silicone na mpe mpe akwa.
4.Precise dijitalụ akara - dijitalụ ikanam njikwa, na-abụghị osisi elu, na iche iche kwalite aluminum alloy isi, eji maka iko, okpu na kwushin ọcha; nke nwere oge dijitalụ dijitalụ na njikwa okpomọkụ, ịnwere ike ịhazigharị igwe ahụ dịka ihe dị iche iche Ntọala oge na ọnọdụ achọrọ. Mgbe oge a kara aka na ọnọdụ okpomọkụ ruru, mkpu na-ada ụda ga-ada ụda ma ihe mmewere ga-akwụsị ikpo ọkụ.
5.The igwe igwe eji ekpughere ya nke nwere udiri -ihe nkpuchi, enwere ike gbanwee ya dika oke ihe. Kemwepu ike ikpo okwu di ala, Gbanwee ihe ozo (choro Phillips Screw Driver). Ihe mbughari silicone na akwa mpe akwa. Wuru na-fuuz maka nchebe iji
6.Wide Range of Uses - igwe na-ekpo ọkụ jikọtara kachasị mma maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọkachamara, obere ụlọ ọrụ na ojiji nkeonwe. Enwere ike iji igwe na-ekpo ọkụ 5-in-1 maka T-shirts, okpu, efere seramiiki, taịlị, iko, ụsọ mmiri, jigsaw puzzles, leta na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara akwa na ihe, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
7.Satisfaction guarantee.If maka ihe ọ bụla ị na-adịghị afọ ojuju, biko mee ka anyị mara na anyị ahịa ọrụ ga-eme ike anyị niile iji nyere gị aka.
8.Note: Ọ bụrụ na efere kpo oku adịghị ewepụ, biko buru ụzọ chọpụta ma etinyere igwe ahụ na ebe ọrụ dị larịị, ma hụ na efere kpo oku anaghị ama jijiji site na ịhazi mgbali nrụgide iji hụ na nrụgide zuru ezu.
Aha ngwaahịa ： NEW 5 na 1 Combo Okpomọkụ Nyefee Press Machine
Agba ： Nwa, Purple
Oge Control ： 0 - 999 sekọnd
Voltaji: 110V / 220V
Okpomoku Ozo (℉): 32 - 482 ogo ℉
T-uwe akwa efere ： 15 "x 15"
Okpu okpu / Cap Press ： 6 "x 3" (curved)
Mug Pịa ： 3 "-3.5" dayameta (11oz)
Efere Press ： 5 "Max n'obosara na 6" max n'obosara
Nke gara aga: T uwe elu okpomọkụ pịa igwe
Osote: 2 in 1 mug okpomọkụ pịa igwe
5 n'ime igwe ngwakọta igwe kombo 1